Barashada Dugsiga Sare | Dugsiga Sare - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Carruurnimada Hore (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Dugsiga Hoose ee Afton-Lakeland (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Dugsiga Hoose ee Andersen (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Dugsiga Hoose ee Brookview (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Lake Elmo Elementary (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Lily Lake Elementary (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Dugsiga Hoose ee Rutherford (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Dugsiga Hoose Stonebridge (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Dugsiga Dhexe ee Oak-Land (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Dugsiga Dhexe ee Stillwater (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Dugsiga Sare ee Stillwater Area (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
St. Croix Valley ALC (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Barashada Dugsiga Sare
Wax ka barashada meel kasta
In kasta oo ay tahay hamigeenna ah in ardaydeennu maalin walba na hor-yaalliin, haddana waxaan ognahay in in badan oo ka mid ah ardaydayada dugsiga sare ay leeyihiin xirfado iyo dhiirrigelin ay wax kaga bartaan meel kasta. Macallimiinteena cajiibka ahi waxay abuurayaan casharo soo jiidasho leh oo adag si ay ardayda uga dhigaan kuwo wax baranaya iyada oo aan loo eegin waxa aafadu nagu habsatay!
Ku noqo Qorshaha Dugsiga
Habka Barashada Fogaanta - rubuca 3-aad
Ku noqo Jadwalka Dugsiga
Ka dib marka la cusbooneysiiyo gobolka Qorshaha Wax Barashada Nabdoon, dugsiga sare "On the Dial" ardaydu waxay ku laaban doonaan dhismahayaga si ay shaqsi ahaan wax u bartaan Ardaydu waxay ku soo laaban doonaan dugsiga Isniinta ilaa Khamiista waxayna sii wadan doonaan inay wax ka bartaan guriga jimcaha inta ka harsan sanad dugsiyeedka.
Ku noqo Jadwalka Dugsiga (dib loo eegay 2/25/21):
Febraayo 16: Ardayda Fasalka 6-12 ee horay loogu aqoonsaday soo noqoshada faragelinta ee taageerada shaqsiyeed.
Ardayda si rasmi ah loo aqoonsaday horumar la'aanta waxbarasho awgeed waxaa lagu casuumi doonaa inay ku noqdaan dugsiga. Qoysaska ay saameysay waxaa lala xiriiri doonaa macluumaad dheeri ah.
Maarso 8: Dhammaan ardayda dhigata fasallada 9-12 waxay ku soo noqdeen dugsiga
Sidee Ugu Noqon Doonaa Iskuulka
Waxaan la socon doonaa tilmaamaha ugu dambeeyay ee gobolka iyo istaraatiijiyadyada yareynta si aan ugu soo dhaweyno ardayda iyo shaqaalaha sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Qaar badan oo ka mid ah borotokoollada jira inta lagu jiro barashada isku dhafan ayaa sii ahaan doona - sida nadiifinta joogtada ah iyo jeermiska aagga taabashada sare iyo isticmaalka wejiga daboola dhammaan ardayda iyo shaqaalaha. Waxaan u soo bandhigi doonnaa shaqaalaheena imtixaan joogto ah oo COVID-19 ah iyadoo lagu saleynayo talo soo jeedinta Waaxda Caafimaadka ee Minnesota, waxaan ku dhiiri gelin doonaa ardayda iyo qoysaska in la imtixaano labadii toddobaadba mar sidoo kale. Baro wax badan oo ku saabsan fursadaha baaritaanka ee qoysaska .
Waa kuwan waxyaabo yar oo u kala duwanaan doona barashada qofka:
Dhammaan ardaydeena On The Dial waxay u imaandoonaan iskuulka wadajir ahaan, sidaa darteed fasallada iyo maqaayadaha waxay ka buuxsami doonaan sidii ay ahaayeen xilligan dayrta. Mar alla markii ay suurta gasho, 6 cagood oo kala fogaansho jireed ah ayaa lagu ilaalin doonaa ardayda dhexdooda. Marka 6 fuudh aan la buuxin karin, ardayda waxaa lagu kala soocayaa ugu yaraan 3 fuudh.
Macalimiinta iyo shaqaaluhu waxay ilaalin doonaan 6 cagood oo ah kala fogaanshaha jir ahaaneed ee midba midka kale iyo ardayda markay suurtogal tahay, ama waxay isticmaali doonaan carqalad plexiglass ah.
Basaska iskuulku waxay ku ordi doonaan awood ama ku dhow. Windows-ka basaska waa la jabi doonaa si ay uga caawiso socodka hawada.
Ardayda waxaa loo qoondeeyay kuraas baska iyo maqaayada.
Xilligan Qaabka Qaabka Wax Barashada
Maxaan kaa caawin karnaa inaad u hesho ardayda Dugsiga Sare?
Hel caawimaad farsamo
Filashada Barashada Maalinlaha
Imaanshaha maalinlaha ah waxaa laga filayaa ardayda oo dhan. Kaqeybgalka qof ahaaneed waxaa qaadan doona macalinka iyo kaqeybgalka guriga waxay kusalaysnaan doontaa howlaha internetka,
Chromebooks-ka degmadu soo saartay ayaa loo isticmaali doonaa howlaha iskuulka. Kaliya ardayda dhigata Iskuulka 'Waterwater Area School' ayaa geli kara buuggaagta ay soo saarto degmada ee 'Chromebooks'.
Jadwalka maalinlaha ah ee ardayda dugsiga sare
Joogtaynta qaabdhismeedka iyo jadwalka joogtada ahi waxay muhiim u tahay ardayda wax ka barata masaafada, laakiin waxaan sidoo kale aqoonsan nahay baahida loo qabo dabacsanaanta markay wax ku baranayaan guriga.
Goobta tijaabada candhuufta ee bilaashka ah ee 'COVID Armory'
Ma u baahan tahay tijaabada COVID-19? Goob lagu tijaabiyo candhuufta oo bilaash ah ayaa laga hirgaliyay xerada keydka xoolaha ee Stillwater.
Qaado tijaabada COVID bilaash ah gurigaaga
Adeegyada Caafimaadka ee Minnesota iyo Vault waxay iska kaashadeen inay guriga ku siiyaan baaritaanka candhuufta ee COVID-19 qof kasta oo aaminsan inuu u baahan yahay in la baaro, ama astaamo la'aan ama astaamo la'aan, iyadoo aan wax kharash ah ku bixin.
Hel cunno bilaash ah xitaa markaad wax ka baraneyso guriga (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Haddii carruurtaadu weli ku jiraan dugsiga ama u guurayaan waxbarashada masaafada, weli waxay heli karaan quraac iyo qado bilaash ah maalin kasta iyada oo ay ugu wacan tahay maalgelinta gaarka ah ee federaalka.
Shahaadada ardayda dugsiga dhexe & sare
Nidaamyada kala-bixinta ee xilliga guga hadda laguma dabaqi karo. Dhaqammada qiimeynta dhaqameed ayaa dib ugu soo noqday meeshii.
Waxaan ka walwalayaa ilmahayga (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Haddii qoyskaagu yahay wax la mid ah qoysaska badankood, qof walbaa wuxuu dareemayaa culeys sannad dugsiyeedkan oo aan caadi ahayn. Waxaan halkan u nimid inaan caawinno.
Soo Bandhigida Barashada Fogaanta 2.0
Barashada fogaanku waxay umuuqan doontaa wax aad uga duwan sidii ay ahayd gugan. Waxaan u isticmaalnay ra'yi celintaada inaan ku badalno qaabka aan wax u bari doono ardayduna ay wax baran doonaan.
Kaligaa ma tihid: Aasaasiga wuxuu ubaahan yahay caawimaad
Haddii aad ku dhibtoonayso inaad la kulanto baahiyaha aasaasiga ah (sida cuntada, guryaha, dhaqaalaha) fadlan la tasho kheyraadka soo socda ee maxalliga ah ee kaa caawinaya inaad ka caawiso helitaanka baahiyaha maalinlaha ah.